Waa maxay Business Sirdoonka (BI / BW)? | Show Top
Waa maxay Business Sirdoonka (BI / BW)?
Business Intelligence waxaa bedel xogta ah in a dukaamada ganacsiga waxaa ku jira ay database, oo taas oo faa'iido leh.
Xogta caadiga ah la tranformed waa xog transactional sida xogta iibka. Wixii ganacsi kasta oo macluumaad iibka shaqsi aan aad u faa'iido badan, laakiin aggregating xogtan (summerising xogta) dhali karin qaar ka mid ah natiijada awood go'aan ganacsiga. Tusaale ahaan, falanqaynta xogta iibka shaqsi ee saddex-1-aad ee 2013 ma noqon doono mid aad u faa'iido leh, laakiin haddii ay taasi xogta iibka ayaa waxaa summerised, tusi lahaa iibka guud ee muddada iyo noqonayaa mid ka awood badan waxa la barbar dhigi karaa Quarter 2aad ee 2013. Waxay noqon for go'aan u noqon karaa aalad awood u kordhiyaan iibka, abuuro saadaal iyo horumarinta xeeladaha ganacsi cusub.
Business Intelligence isticmaala xaddi badan oo data iyo waxay noqon karaan eheeyn aan qalab IT ah loo isticmaalo inay u beddesho xogta. Xogta transactional in BI isticmaalka iman karo oo laga helay ilo kala duwan, sida database transactional sida Oracle Macluumaadka ama server MS SQL. Xogta ayaa intaas ka dib laftiisa habka ETL loo yaqaan Warbixiinta. Bedelaan iyo culayska.
Warbixiinta waa hab ee soo saarida xogta laga isha. Bedelaan badalayaan xogta ku galay qaab ku haboon in uu kaydiyo in Warehouse Data. Warehouse Data waa kaydinta xogta loo isticmaalo in BI, taas oo xogta diyaar u yahay warbixinta.
Macluumaadka ku kaydsan ka dib markii habka ETL ka, waxa lagu kaydiyaa Warehouse Data. Tani waa xogta la falanqeeyay oo soo bandhigay in Wararka, diyaar u yihiin go'aan lagu tarjumo.
The software caadi ahaan loo isticmaalo waa Dheecaan Bi iyo Microsoft Bi.
Business Intelligence Microsoft Bi Dheecaan Bi No comments Item Jaishi
← Disable Power HTC in ay siiso Notification on Mid ka mid ah HTC ah Sida loo helo BIOS on a HP xaasidnimo M7 Laptop? →